iphrinta ye-cake edible ewusizo China Manufacturer
Incazelo:AmaSpredishithi adla amaqebelengwane,Inani lephrinta ye-Cake,Iphepha Lokudla Elidliwayo
Home > Imikhiqizo > Iphrinta yokudla > I-Macaron Printer > iphrinta ye-cake edible ewusizo
Amashidi adla amaqebelengwane angakwazi ukuphrinta kunoma yikuphi ukufika ku-11cm x 11cm futhi kufike ku-180 mm ukuphakama.
Inhloko ye-HP isebenzisa ubuchwepheshe be-Thermal Ink jet, i-ink engena ekhanda elingaphezu kuka-300 degrees centigrade jets.
Ngakho-ke uma iphrinta ifika, faka i-cartridge ye-ink, bese uvula iphrinta. Ngemuva kokuthi konke kulungile, bese ugcwalisa inkinobho ku-cartridge enki,
bese ungaphrinta. Uma ungagcwalisi inkinobho nokuphrinta, izoshisa ikhanda, futhi ngezinye izikhathi zibi nakakhulu, izobhubhisa ibhodi eliphambili le-HP.
Ngakho khumbula ukuthi uma kungekho inki ekhibhodi leyinki, kufanele ugcwalise inki kuqala bese uprinte. Uma le cartridges iphuma ngoyinki, sicela uqaphele
ukuze ugcwalise inki bese uyisebenzisa.
Le ntengo yephrinta yekhekhe ingaphrinta ikhofi, ikhekhe, amakhukhi, ushokoledi, amabhisikidi, ama-candies, i-dessert njengoba udinga, iphrinta izofika nge-software,
i-cartridge, izesekeli izingxenye, ibhukwana, imishini ye-CD, njll Indlela Yokugcwalisa Inkinobho
Ingafakwa ngokuqondile kumbhalo omnyama we-15ML, 5ML umbala ngamunye.
Emva komjovo kahle, ibhuloho lihlehlise izikhathi ezimbalwa, bese uprinta, ekuqaleni kokunyathelisa, ngoba kukhona umoya osesithombeni,
umphumela wokunyathelisa okwenzekile akulungile ekunyatheliseni kokuqala, ungakhathazeki, uma nje uqhubeka ukuphrinta kuzoba ngcono.
Ama-Ripples asetshenziswa yinani elikhulayo lezinkampani emhlabeni jikelele ukubandakanya izethameli zabo, ukukhulisa ukuqwashisa brand kanye nokwandisa ubuqotho.
Imfihlo yokuphumelela kwethu ilula: sikusiza ukuthi udale isipiliyoni esiphuzo sokuphuza esidonsela amakhasimende kuzo futhi sibagcine bebuya ngokunye.
Izoba nomphumela ovelele wokubukwa ngaphambi kokunambitha ukudla okumnandi ukugcina umzuzu omuhle nenjabulo. Isithombe singakwazi ukuvela ku-100%
Sithanda ukwethula ezidliwayo isithombe ephepheni Isakazwe
I-original, i- canon edliwayo iphrinta ye-image iphenduka iziphuzo ezijwayelekile eziphunga iziphuzo zibe nakho okujabulisayo kwamakhasimende. Khetha kusuka emangalisa
AmaSpredishithi adla amaqebelengwane Inani lephrinta ye-Cake Iphepha Lokudla Elidliwayo Iphrinta edlayo yamaqebelengwane AmaSpredishithi e-Cake we-Cake Amaphrinta athengiswayo athengiswayo Amakhukhi Inani lephrinta Amaphrinta we-Power Bank Printer